थाइराइड के हो ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय « Harekpal
थाइराइड के हो ? यसका लक्षण र बच्ने उपाय
डा. प्रियादर्शनी योन्जन।शरीरको मेटाबोलिजम अर्थात् खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न थाइराइड हर्मोन आवश्यक पर्छ। थाइराइड रोग होइन। यो हाम्रो घाँटीमा हुने ग्रन्थी हो। यसले टी ३ र टी ४ नामक हर्माेन बनाउँछ। यो हर्मोनले शरीरलाई चाहिने तत्व विभिन्न अंग, कोशिकामा पु¥याउन सहयोग गर्छ र शरीरले तागत प्राप्त गर्छ। मेटाबोलिजम फोक्सो, हड्डी, छाला, मुटुलगायत शरीरका सबै अंगलाई चाहिने कुरा हो।
थाइराइड समस्या जटिल र डराउनु पर्ने खालको होइन। यसले आयु घटाउँछ भन्ने भ्रम छ। त्यो गलत हो। थाइराइड भएपछि बच्चा हुँदैन भन्ने सोचाई पनि गलत हो। उपचारपछि सन्तान हुन्छ। थाइराइड भएकामा क्यान्सरको जोखिम हुने भएपनि अधिकांश अवस्थामा क्यान्सर नै हुन्छ भन्ने हुँदैंन। थाइराइड ग्रन्थी एक सेन्टिमिटरभन्दा ठूलो छ भने इन्जेक्सनको माध्यमबाट पानी वा मासु झिकेर जाँच गरिन्छ। यदि खराबी देखियो भने शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। यदि फोका ४ सेन्टिमिटरभन्दा ठूलो छ र सास जाने नली थिचेको छ भने शल्यक्रिया गर्ने सल्लाह दिइन्छ।स्वास्थ्यखबरबाट